နှစ်ချို့ကော်ဖီ: September 2008
၂၀၀ရ စက်တင်ဘာငါ့ရင်ကို ထိုးခွဲဝင်လာပြီ…နာကျင်ခံခက် လက်သီးတွေကျစ်ကျစ်ဆုပ်မျက်ရည်တွေတွေကျနှလုံးသားကိုဓားရှသလို…ဘုရားသားတော်တွေကိုမှဓါတ်တိုင်ကြိုးတုပ်ရိုက်နှက်တတ်သတဲ့လေကမ်းကုန်အောင်အစွမ်းကုန်ယုတ်မာပေါ့အာဏာရှင်ရယ်….ကမ္ဘာကျေသော်မှဥဒါန်းမကျေနိုင်..ငါတို့မှာအံကျိတ်ရင်းကြေကွဲသွေးအသက်မျက်ရည်ကလွဲလို့ငါတို့ပြည်ကိုဘာပေးမလဲ….။လွန်ခဲ့တဲ့၁၉နှစ်…ငါခြောက်နှစ်သားဘ၀သိဟ်ရာသီဖွား ၈ ဂဏန်းသမားငါမွေးနေ့မှာ အမေကထမင်းသုပ်လေးနယ်ဖတ်ကျွေးဖို့သားရေ လမ်းထိပ်မှာပဲမှုန့်လေးသွားဝယ်ဆိုတော့ကလေးပီပီပြေးထွက် လမ်းပ်ါမှာလေငါမြင်ရတာကစစ်ကားသုံးစီး…လူတွေကစစ်ကားကိုခိုးကြည့်ကျောင်းသားတွေတက်လာပြီဒုက္ခပါပဲညည်းသူကညည်းသတိပေးဖို့ကြိုးစားသူကကြိုးစားတားချင်သူကတားဗျာများကြတဲ့ကြားထဲရိုင်ဖယ်သံတစ်ဂျိမ်းဂျိမ်းပေတစ်ရာလမ်းမှာသွေးအလိမ်းလိမ်းဒီမိုကရေဆီတောင်းတာနဲ့၁၆ နှစ်သားဟာ နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုကိုစီမံသူတို့အမြင်မှာသေဒဏ်ဒီလိုနဲ့ ငါ့မြင်ကွင်းတွေေ၀၀ါးလမ်းပေါ်မှာ လူအုပ်လိုက်သွားကိုယ့်နစ်နာမှုကိုတောင်းဆိုတာတခြားကမ္ဘာမှာပဲရှိတယ်ထင်ခဲ့ငါတို့အတွက်မဟုတ်ဘူး…ငါ့အသက် ၂၆ဘယ်တစ်ယောက်ကိုမှမဲမပေးဘူးဖူးငါ့တို့လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ငါတို့ယုံကြည်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးဆောင်ခွင့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလို့မရငါ့ရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဟာတန်ဖိုးရှိရဲ့လားစစ်ဖိနပ် အောက်မှာငါရဲ့နိုင်ငံသားချင်းတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေကျိုးကျေခဲ့ရပြီသားပျောက်ရှာတဲ့ငါ့အဘွားထောင်နာမည်အမျိုးမျိုးကိုအလွတ်ရသွားခဲ့တယ်အမေ့ကငါ့ကို နိုင်ငံရေးနဲ့မပက်သက်ဖို့အမျိုးမျိုးနားချတယ် သူ့ရင်ထဲမှာလည်းဒဏ်ရာတွေရသွားဖူးတာကို….။ဒါပေမယ့်နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံသားတွေမှမလုပ်ရင် ဘယ်သူတွေလုပ်ဖို့လဲအုပ်ချုပ်ခံဝါဒဟာနှစ်ပေါင်းရာချီနောက်ကျခဲ့ပြီလူဆိုတာကိုယ့်ကိုကိုယ်အုပ်ချုပ်ရတယ်ကိုယ်လုပ်ရပ်ကိုယ်တာဝန်ယူတူညီမျှတတဲ့ ဥပဒေအောက်မှာဘယ်သူ့ကိုမှမော်ဖူးစရာမလိုဘူးဒီလိုငါမျော်လင့်ခဲ့ဖူးတယ်….။ဒီလိုနဲ့နှစ်တွေသာကြာ၂၀၀ရ စက်တင်ဘာမိုးစက်တွေကြားလောကသစ္စာတရားဟာလမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့ပေါ့…ဗုဒ္ဒသားတော်တွေကတစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်လမ်းပေါ်ထွက်ပြီဝေနေယျ အများအတွက်မေတ္တာဓါတ်စည်းဖျန်းမကျွတ်လွတ်နိုင်သေးတဲ့ တစ္ဆေတွေအတွက်ပါအမျှဝေလေရဲ့မိုးတွေရွှဲတဲ့စက်တင်ဘာပေါ့သမိုင်းတစ်ခေတ်မှာသန့်စင်မှုနဲ့နက်ရှုိုင်းစေခဲ့ပြီ…။မိုးလှိုင်ည(စက်တင်ဘာရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ရက်မှာဒီကဗျာလေးကိုပြန်ဖတ်မိတယ်.......ငါတို့တွေမမေ့သေးဘူး...ဘယ်တော့မှလည်းမေ့တော့မှာမဟုတ်ဘူး... စက်တင်ဘာ သမိုင်းကြွေးကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ပြန်တောင်းဆိုဖို့......) Posted by
အရူးနှစ်ခါဖြစ်ရတယ် ချစ်မိတာရယ်...ဖွင့်ပြောမိတာရယ် ဘယ်သူပြောသွားတာလည်းမမှတ်မိတော့ပါ… အခုတော့ငါက အရူးလေးခါ… နှစ်ခါချစ်မိလို့နှစ်ခေါက်ဖွင့်ပြောမိတယ် ကိုယ့်ရင်ဘတ်ကိုပဲကျိန်ဆဲရမှာ အခါခါပျိုးခဲ့သမျှချစ်ခြင်းက ဘယ်အခါမှသီးပွင့်မလာဘူး… ငါဟာမင်းမပါရင် အဲဒီလမ်းကိုငေးယုံပဲတတ်နိုင်ခဲ့ ချွှင်းဂန်းဝါးရင်းငါစောင့်ဆိုင်းခဲ့ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်လေး စည်ပင်နယ်နိမိတ်ထဲကနေ ဖျက်သိမ်းခံလိုက်ရ… အရူးတစ်ယောက်ရဲ့ နှလုံးသားနယ်နိမိတ်မှာ ချစ်ခြင်းကိုဘယ်တော့မဖျက်သိမ်းဘူး ကောင်မလေးရေ ကောင်မလေး…ရေ နောက်ထပ်လာမယ့် ဒဏ်ရာတွေအတွက်တော့ ငါ့ရင်ဘတ်မှာ နာကျင်မှုလက်ကျန်မရှိတော့ပါ…။ မိုးလှိုင်ည (ဘာခေါင်းစဉ်တပ်ရမယ်မှန်းမသိလို့ ဆရာသစ္စာနီရဲ့ အမည်မဲ့ ကဗျာတွေလို အမည်မဲ့လို့ပဲ ခေါင်းစဉ်ပေးလိုက်မိတယ်)
ဟောဒီကောင် လူဖြစ်ကြောင်း သက်သေထူဖို့ ...အဆင့်အတန်းမြင့် လူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေထူဖို့ ...ဘာတတ်ကြောင်း ညာတတ်ကြောင်း ...ဘာတွေကို ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ...သက်သေတွေထူဖို့ ...အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု တပ်ပေးပါ ...ဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်စေဖို့ ...လူတကာငေးမောအားကျနေစေဖို့ ...ဒင်္ဂါးသံတစ်ချွင်ချွင်ပေး ခြေအေးဝမ်းရောင်စေဖို့ ...ထီးဖြူပြီး ဖိနပ်ပါးစေဖို့ ...သွားစရိတ်လာစရိတ်တွေ ကုန်စေကျစေဖို့ ...မြင်မြင်ကရာ တွေ့တွေ့ကရာတွေသွားရည်တမြားမြားကျသွားစေဖို့ ...ဟောဒီကောင့်ရင်ဘတ်ကို အမှတ်တံဆိပ်တပ်ပေးပါ ...လူဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြဖို့ISO နိုင်းဘဲဥဘဲဥ ... လက်မှတ်ပြပေးပါCertified to ..... မှာ လက်မှတ်ထိုးပေးပါဘာ Pass ညာ Pass တွေ ထုတ်ပေးပါငါ လူလိုသူလိုနေနိုင်ပါလျှက်ကယ်နဲ့လူနဲ့သူနဲ့ မတူသလိုဖြစ်ဖြစ်နေလို့ပါလေအဲဒီ သောက်သုံးမကျတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တွေကိုပဲလူဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံချက်ကလေးဖြစ်ဖြစ် တံဆိပ်တပ်ပေးကြပါတော့ဟောဒီဘ၀ကို ဟောဒီကောင်ကစာရွက်စာတမ်း မပြနိုင်လွန်းလို့ပါလေ။ကိုဖြိုး
စက်တင်ဘာမိုးကဘာအညှိုးမှလည်း မရှိပါဘဲ “ရွာ”စက်တင်ဘာနေကလည်းဘာတန်ခိုးမှ မရှိပါဘဲ “ပြင်း”ဟောဒီရင်ဘတ်ထဲမှာလေ “ခံပြင်း” နေလိုက်တာလူဖြစ်ရတာ “ရင်နာ” တယ်ကိုဖြိုး Posted by
အဲဒီနေ့မနက်ပေါ့…. အိပ်ပြန်ချိန်ကိုိကြိုလင့်လာတဲ့ငှက်ကလေးလေ ငါ့မြို့ပျက်ထဲကို တစ်ထောက်ဝင်နားတယ် `မြို့ကြီးက ဘာလို့ဟောင်းနေတာလည်း´ `ကံမကောင်းအကြောင်းမလှလို့ပါ…သူငယ်ချင်းမရေ´ နံရံမှာတွယ်ကပ်နေတဲ့ သစ်ပင်တွေလို့ ဒီမြို့ထဲက လူငယ်တွေဟာ ဘယ်အချိန်ခုတ်ထစ်ခံရမယ်မသိနိုင်ခဲ့ သူတို့အိပ်မက်တွေကတော့ အမြဲသစ်လွင်နေလျှက်လေ… ကိုးရက်ကိုးလမှာ 99စနေနဲ့ ငါတို့တွေဆုံဖြစ်ခဲ့တယ် ရင်ဘတ်ချင်းတူသူတွေရဲ့ ကူးလူးလာတဲ့သံစဉ်တွေကြားမှာ အမြဲအမှတ်ရနေမယ့် ကိုးရက်ကိုးလ99စနေ……॥ မိုးလှိုင်ည Posted by
ကဗျာဆရာပေါ့စကားလုံးတွေနဲ့အတူတူဟောဒီလောကကို ရင်ကွဲနာကျနေလိုက်တာအရာအားလုံးထက်ပိုတဲ့ အရာတစ်ခုကိုသူတွေ့ရှိသွားခဲ့မိလို့တဲ့လေသိပ်ချစ်ဖို့ ကောင်းတာပဲလို့တောင်မှမရေရွတ်ရဲ မငြီးတွားရဲသိပ်သည်းစွာ သိမ်ငယ်နေမိပြန်ပေါ့အရာအားလုံးထက်ပိုတဲ့ အရာတစ်ခုအရာတစ်ခု .. ရင်ဘတ်အက်ကြောင်းအတုတွေနဲ့အတူမြင်မြင်ရာကို ပြုစုခဲ့တယ်အခုတော့လည်း ခရာတာတာ ညုတုတုရယ်နဲ့လူ့ဘ၀ကို အက္ခရာတွေသုံးပြီး တည်ဆောက်မိလိုက်တော့ဗြုန်းဆို ပြုတ်ကျသွားခဲ့တာတွေကရင်ခုန်သံ အသံခုနှစ်ထပ်ပြီးတော့လည်း မတ်နေအောင်ထရပ်လဲကျခါနီးလက်က ထရပ်ခါနီးခြေထောက်ကို ဆွဲချတယ်ငါ့မှာက တစ်ဝက်တစ်ပျက်တွေချည်းပါပဲအားလုံးကလည်း မပြီးဆုံးသေးပေါ့ဘ၀ထဲမှာငိုချင်းရှည်တွေချည်း ချပြရလွန်းတော့လည်းမျက်လုံးတွေတောင် မို့အစ်လို့နေကြတယ်ပြီးတော့လည်း ပြီးတာပါပဲကွယ်လို့ပါးစပ်ကထုတ်ကာပြောရင်ထဲမှာ မောလိုက်တာကွယ်။ကိုဖြိုး
အမှတ်တံဆိပ်မပါတဲ့ အကျီင်္တစ်ထည်ဝတ်ချင်တယ် အမှတ်တံဆိပ်မပါတဲ့ စီးကရက်တစ်လိပ် အမှတ်တံဆိပ်မပါတဲ့ အရက်တစ်ခွက် အမှတ်တံဆိပ်မပါတဲ့ လမ်းတစ်လမ်း အမှတ်တံဆိပ်မပါတဲ့ မြို့တစ်မြို့ အမှတ်တံဆိပ်မပါတဲ့ အိပ်မက်တစ်ခု အမှတ်တံဆိပ်မပါတဲ့ နေ့ရက်တစ်ခု အမှတ်တံဆိပ်မပါတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ဘာအမှတ်အသားမှပါမလာတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ် လိုချင်တဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တွေကိုမှင်နီတားပြီး စွန့်ပစ်ထားလိုက်ပြီ… အခုဒီမှာ `လူ´ ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံး ခင်ဗျားတို့အားလုံးကို အမှိုက်ပုံးထဲပစ်ဖို့ ဒီကဗျာမှာ ကလောင်အမည်ဆိုတဲ့အမှတ်အသားမပါပါ…।။;;;;;;;;;;;;;;;
စက်တင်ဘာဟာ စက်တင်ဘာပါပဲအရင်နှစ်တွေတုန်းကအတိုင်းပဲမိုးတွေက မတော်တဆလိုလိုနဲ့ ရွာချငါ့မှာ မျက်ရည်တွေ ဖြိုင်ဖြိုင်ကျလိုက်ရတာပြီးတော့လည်းအိပ်မောကျ ...ချစ်သောသူကို လွမ်းရတဲ့ညကတစ်ညလုံးလုံး စက်တင်ဘာအကြောင်းတွေကို စဉ်းစားအရင်နှစ်တွေတုန်းကတည်းက ဖျားနာနေခဲ့တဲ့နှလုံးသားတွေကိုဘယ်သူတွေ စာနာနေကြပြီလဲ။ကိုဖြိုး
သူသိတာတစ်ခု ကျွန်တော်သိတာတစ်ခု ပေါင်းလိုက်တော့ မသိခြင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ် သူ့ငိုသံတစ်ဝက် ကျွန်တော့်ငိုသံတစ်ဝက် ပေါင်းလိုက်တော့ ရယ်သံအသစ်စက်စက်ဖြစ်သွားတယ် သူ့ပိုက်ဆံတစ်ချို့ ကျွန်တော်ပိုက်ဆံတစ်ချို့ ပေါင်းလိုက်တော့ အဝေးက မြို့ကလေးတစ်မြို့ သူ့အိပ်ခန်းတစ်ခန်း ကျွန်တော့်အိပ်ခန်းတစ်ခန်း ပေါင်းလိုက်တော့ ဘ၀၏ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပေါ့။ နေမျိုး (လူဖြစ်ရတာကောင်းတယ် ခေတ်ပေါ်ကဗျာစာအုပ်မှ)
အရည်မရ အဖတ်မရ စကားလုံးများဖြင့်စကြာဝဠာကြီးကို တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်
စကားလုံးများဖောင်းပွလာသမျှအဓိပ္ပါယ်တွေကွေ့ကောက်သွားကြသည်သိသမျှအိတ်သွန်ဖာမှောက်လူတတ်ကြီးလုပ်ပြလို့ရသည်ဒုက္ခိတဖြစ်နေသောစကြာဝဠာကြီးကိုချိုင်းထောက်တစ်ဖက်ပေးရန်အတွက်သစ်တောတစ်ခုလုံးကိုခုတ်ဖြတ်ပစ်ရန်မလိုပါပူနွေးလာသော ကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်ရန်အတွက်ရေခဲခေတ်တစ်ခုပေးရန်ဆုတောင်းစကားကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုများဆိုင်ရာအဘိဓာန်တွင်ထည့်သွင်းဖော်ပြဖို့အတွက်အငြင်းအခုန်မဖြစ်ကြကုန်လင့်ပေါက်ကွဲရန်အသင့် ခန္ဒာကိုယ်များကိုကိုက်မြိုထားရသော ကမ္ဘာမြေကြီးအားဝမ်းနည်းစကားဆိုဖို့လူတချို့ကကြိုးစားနေကြသည်နိုင်ငံတော်ကိုလူတွေက အုပ်ချုပ်ပြီးလူတွေကိုနိုင်ငံတော်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအဓိပ္ပါယ်မရှိလုပ်ကိုင်ပြီးတဲ့နောက်လူတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတာစကားလုံးတွေပါဟုတစ်ယောက်ယောက်ကပြောပြီးတစ်မိနစ်ကိုကျည်ခုနှစ်ရာထွက်သည့်ဂန်းကိုတစ်ယောက်ယောက်ကတီထွင်ပေးခဲ့ပြန်ပါသည်ရေစည်လှည်းတွန်းသောယောကျာင်္းတစ်ဦးကိုအာခီးမီးဒိဟုခေါ်သောသူငယ်ချင်းတစ်ဦးကျွန်တော့်ထံရှိခဲ့ဖူးသည်။ရူပဗေဒစာမေးပွဲကျသည့်အတွက်အတန်းရှေ့ထွက်အရိုက်ခံခဲ့ရဖူးသောကျွန်တော်သည်သိပံ္ပပညာသာမရှိလျှင်လူသားတွေပိုမိုယဉ်ကျေးလာမည်ဟုမှတ်ချက်ပေးဖူးပါသည်…။သင်ထင်မြင်ချက်ကိုအောက်ခြေမှတ်စုတွင်ရေးထားရန်အတွက် ၀န်လေးနေဖို့မလိုအပ်ပါ။မိုးလှိုင်ည
ကျွန်တော်က တိမ်ကလေးပေါ့ချစ်သူက မုတ်သုံလေကလေး ဖြစ်တယ်ကျွန်တော့်မှာ လွင့်လိုက်ရတာဒါဟာ အချစ်နဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရာသီဥတုပေါ့ကျွန်တော်က လူဆိုရင်ချစ်သူက ကျွန်တော့်ဘ၀ကလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်က လူ့ဘ၀ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်က လမ်းပေါ်မှာ လွင့်လွင့်သွားတဲ့ရွက်ကြွေကလေးလည်း ဖြစ်တယ်ချစ်သူက အဲဒီရွက်ကြွေကလေးကိုမှ ဖြတ်နင်းသွားတယ်ပြီးတော့လည်း ရယ်လိုက်မောလိုက်ပါပဲကျွန်တော့်မှာသာ ခါးကျိုးပြီး ကျန်ရစ်ခဲ့ရဘ၀ဆိုတာကို ရယ်စရာမောစရာလို့သဘောထားခဲ့ပြီးကတည်းက ကျွန်တော့်မှာရယ်ရတာထက် မောရတာက ပိုပိုများများနေပေါ့ဒီတစ်ခါလည်း ထပ်မံရှူံးနိမ့်ပြန်ပေါ့ထားလိုက်ပါဦးကွယ်နားနားနေနေနေဖို့တောင် အချိန်တွေက မလုံမငနဲ့ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော်ပြန်ထနိုင်ဖို့ကျွန်တော့်တောင်ဝှေးလေး ကျွန်တော်ပြန်ဖြစ်ရဦးမယ်အဲဒီ မိုးနှောင်းရာသီရဲ့ တစ်နေ့မှာကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် ပြန်ရှာလို့ မတွေ့တော့ဘူးကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော် ကျပျောက်သွားခဲ့ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကျွန်တော်တို့အတူတကွ နေထိုင်နေကြရင်းချစ်သူကို တမ်းတလွမ်းဆွတ်နေမိပေါ့လောကမှာ ဟန်လုပ်ပြီး ပြုံးပြနေရတာတွေက များလွန်းတော့ပါးအညောင်းဖြေစက်ကလေးတစ်လုံး လိုမယ်ဘာတစ်ခုမှ မသေချာတဲ့ဘ၀မှာကိုယ့်သေနေ့ကို ကိုယ်ပြန်ရေးချလိုက်ရတာလောက်သေချာနေတာ မရှိတော့ဘူးအား … တယ်လည်း အရသာရှိသကိုးကွယ်သူငယ်ချင်း …“ငါ … ဒီနေ့ကို ရွေးချလိုက်တယ်”အားရပါးရ … ။ကိုဖြိုး
ဒီနေ့ သာကေတကျောက်တိုင်က ရွှေပုဇွန်ကဖေးမှာငါထိုင်နေတယ် ကော်ဖီက ကက်ပူချီနိုတဲ့ ငါ့လျှာနဲ့အရသာမတွေ့တဲ့ကိတ်တွေနဲ့ အချောအလှကောင်မလေးတွေ ငါ့ရှေ့ကဖြတ်လျှောက်သွားကြတယ် ငါဘယ်တစ်ယောက်ကိုမှမငေးဘူး…ဖေဖော်ဝါရီ လွန်ခဲ့တဲ့ကာလတစ်ခုမှာ ငါရဲ့အလုပ်သွားနေကျ စတီးထမင်းချိုင့်လေးကိုရောင်းပြီး မင်းနဲ့ငါ လက်ရွေးစင်ကဖေးမှာ ကော်ဖီအတူသောက်ကြတာကို သွားအမှတ်ရမိတယ်… ငါနှလုံးသားတစ်ဝက်ဟာ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပြည့်လျှမ်းနေပြီး ငါ့ရင်ဘတ်တစ်ခြမ်းက တစစ်စစ်နာကျင်ကိုက်ခဲနေခဲ့ ငါတိုရဲ့ရှေ့ရေးဟာ ရင်လေးစရာချည်းပါကွာလို့ မင်းဘယ်တော့မှမတွေးဘူး မင်းဆီမှာဘယ်ကွေ့ရောက်ရောက် လှော်စရာတက်ရှိတယ်လေ ထိရှလွယ်တဲ့ငါကသာ လောကဓံလှိုင်းတံပိုးအောက် ချစ်ခြင်းနဲ့ မျော်လင့်ချက်တွေ ပျောက်ရှခဲ့ရဖူးတယ်… အခုတော့ ငါ့လက်ထဲမှာ ဆရာကျော်ဝင်းရဲ့ ထွိုင်ယာလက်တစ်အယူအဆ ကဗျာဆရာနေမျိုးရဲ့ လူဖြစ်ရတာကောင်းတယ်..ဆိုတဲ့ စာနှစ်အုပ်နဲ့ ခံစားချက်တွေကိုအလောင်းအစားမလုပ်တော့ဘူး မင်းနဲ့ဝေးသွားတဲ့နောက် ကာလတရားအပေါ်မှာ အနှစ်သာရအပြည့် အဓိပါယ်မဲ့နေထိုင်လို့ အသည်းမကွဲအောင်နေထိုင်ခြင်းအတတ် ငါချစ်ခြင်းတရားနဲ့ မပက်သက်တော့ပါ…။ မိုးလှိုင်ည Posted by
ငါ့ကိုက မနေတတ် မထိုင်တတ်နဲ့မာနကလည်း တစ်ခွဲသားတင်မဟုတ်နှစ် .. သုံး .. လေး .. ငါး ခွဲသား ..ပြီးတော့ စကားလည်း သောက်ကြီးသောက်ကျယ်ချည်းပဲ ပြောတတ်သူအနုပညာ ကိုယ်ခံအားကလည်း နေလေတော့ခဏခဏဖျားတယ် …လေတိုးသံ မခံနိုင်တဲ့ သစ်ရွက်တွေလိုကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ပြန်မုန်းရတာလောက်အရသာ ရှိတာ မရှိဘူးသူငယ်ချင်းရေ … မင်း ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ ကဗျာဆရာကလူတကာလို မလိမ်မညာတတ်ပါဘူးဒါပေမယ့် လူသူတော်ကောင်းတွေထက်တော့ အများကြီး ညစ်ပတ်တယ်အများကြီး ယုတ်မာတယ် …ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင် မာတိကာတွေ ဆွဲဆွဲချပြပြီးကာမှဘာစာတစ်ပိုဒ်မှ ပါမလာတဲ့ စာအုပ်တွေလိုငါ့ဘ၀ကို ငါမနေတော့ဘူးလေ …ငါကတော့ ခပ်ယုတ်ယုတ်ပါပဲမကျေနပ်ရင် အော်ဆဲဖို့ကိုချည်း အားယူယူနေမိတယ်မင်းကော … ကျေနပ်ပါတယ်လို့ ပြုံးပြီး ပြောချင်သေးတာလားဒီမယ် သူငယ်ချင်း ငါ့ဘ၀ကို ငါအရင်းအတိုင်းပဲ နေခဲ့တယ်စာတစ်မျက်နှာအတွက်နဲ့တော့ ကိုယ့်စာလုံးကိုယ်ပြန်ပေါင်းမနေတော့ပါဘူးငါတို့အားလုံး အရူးတွေချည်းပါပဲလေ။ကိုဖြိုး
မနေ့ကအတိုင်းပဲ… ဇာတ်လမ်းကရိုင်းလွန်းတော့ အသည်းတဆတ်ဆတ်ခါ… သွေးဆာတဲ့လက်တွေအတွက် သွေးထွက်များခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်များ လမ်းမပေါ်ပြုတ်ကျခဲ့ရတဲ့ ဦးမညွှတ်တတ်သူတို့ရဲ့ဦးခေါင်း အမှန်တရားက မတန်တဆတန်ဖိုးတွေကိုတောင်းဆိုတယ် အသက်ရှင်လျှက်နာကျင်ခြင်းကိုပွေဖက်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကို ငါဖြတ်ခဲ့တယ်…. မေ့ပျောက်လွယ်တဲ့ရက်စွဲတွေရဲ့ အသည်းနှလုံးကို အမှန်တရားဓားနဲ့မွှန်းဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ဘယ်တော့မှမသေတဲ့ လူသေတွေ အခုငါတို့လမ်းမပေါ်မှာနေနေတယ်….။ မိုးလှိုင်ည (ကဗျာဆရာအိုအောင်ရေးဖွဲ့နေကျ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ခေါင်းစဉ်အသုံးပြုထားပါသည်)
ကမ္ဘာအနှံ့ က “ရွှေ”…တံဆိပ် လော်စပီကာ တွေကူပါ ကယ်ပါ တကြော်ကြော်အော်နေရတဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့မွေးရပ်မြေ အကြောင်း နဲ့ ခင်ဗျားတို့ နားထဲကို သံရည်ပူ လောင်းပါရစေ ။ဆရာဝန်တွေက ဆေးရောင်းအင်ဂျင်နီယာတွေက ဈေးရောင်းတော်သူတွေအကုန် ဘေးဂျောင်းလူငယ်တွေ အကုန် အတွေးစောင်းခွင်ရှာနိုင်မှ သူဌေးလောင်း ဖြစ်နိုင်မယ်။အစိုးရကအစ သူခိုးဓားပြ တွေဆိုပေါင်းစားတတ်ရင်တော့ မိုးကျရွှေကိုယ်တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံး ပိုးကျနေလို့ သူများဆီမှာ ကျွန်ခံဖို့goကြပေဗျို့ ။ညာဉ့်ငှက်မလေး တစ်ယောက်က ဖောက်သည်မျှော်မိန်းမတန်ဖိုးကို ရောင်းဖို့ စောင့်နေမယ်နော် တဲ့။ဈေးသည်မလေးတစ်ယောက်က ဝယ်သူမျှော်အကြွေးပင်လယ်ကြီးထဲ ကယ်သူမပေါ်ခေတ်ကြီးကိုက လည်သူဆော်ရှေ့ နောက် မစဉ်းစားမိခဲ့တဲ့ မောင်နှံရှိသမျှ ပစ္စည်းလေးတွေကို ပေါင်နှံမွေးလာမယ့် ကလေးကတော့ အချောင်ခံ။ဂျာနယ်တွေက အတင်းအဖျင်း ရောင်းစားလူပွဲစားတွေက အချင်းချင်း ရောင်းစားလူတစ်ချို့ က လမ်းမတွေပေါ်မှာ တောင်းစားကလေးငယ် တစ်ယောက် မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ကျောင်းသွားပါရာဒို တစ်စီးက ဗွက်တွေ စင်အောင် မောင်းသွားငါတို့ ငိုသံတွေကိုအိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတစ်ချို့ က မကြားချင်ယောင်ဆောင်နေကြတယ်။ဖျာခင်းချင်သူ တစ်ချို့ ကလည်း သနားချင်ယောင်ဆောင်နေကြတယ်။မီးခဲကိုင်ထားရသလိုပဲဆိုတဲ့ စေတနာရှင်တို့ ၊ဦးတည်ချက် ဆယ့်နှစ်ရပ်နဲ့လူ့ ပြည်ကိုဖျက်နေတာလား။ခင်ဗျားတို့ စကားလုံး ကြီးကြီးတွေက ကော်ပီ သံစဉ်ပါ။တစ်ပြည်လုံးလည်း နားညဉ်းနေပြီ… အော်ဂလီ ဆန်ချင်စရာ။ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ကြည့်မိတော့လည်းမနှစ်ကလည်း ဒီနေရာဒီနှစ်လည်း ဒီနေရာရပ်နေလည်း ဒီလောက်ပြေးသွားလည်း ဒီလောက်မို့ ငါ့ ခြေထောက် တွေကတောင် ငါ့ကို ပြောတယ်။သူတို့ ဆက်မလျှောက်ချင်တော့ဘူးတဲ့။ငါ့လက်တွေကလည်း သစ္စာဖောက်ပြန်တယ်။အရှုံးပေး လက်မြှောက်ပြီး ထောက်ခံတယ်။ဒီလိုနဲ့ ...စိတ်ထဲမှာပဲ သိမ်းထားနေရတဲ့ အိပ်မက်တွေလည်း ခေါက်ရိုးကြေ။ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဖြစ်လာတာတွေက ဇောက်ထိုးတွေ။လူ့ သက်တမ်း တစ်ဝက်ကျိုးပြီဆိုတဲ့ အချက်ပေးသံတွေလည်း မြည်လာပြီ။ကျန်တဲ့သက်တမ်း တစ်ဝက်ကို ဆက်လျှောက်လှမ်းဖို့ တောင် အီလာပြီ။“ဆန်တစ်ပြည်ကို ၁၅၀၀ တောင်” အဲဒါ အဘွားညဉ်းတဲ့ အသံ။“မြန်မာပြည်ဟာ ဘယ်သူမှ မနေချင်ကြတော့တဲ့ အရပ် ဖြစ်သွားပြီ” အဲဒါ ခါးသီးတဲ့ အမှန်။ဒီကြားထဲ…နာဂစ်က တစ်ချက်မွှေ့ ဧရာဝတီက လူတွေခမျာ အသက်စေ့တစ်ချို့ လူတွေကလည်း အကွက်ရွှေ့ အစိုးရ ကုလားထိုင်ကတော့ တစ်ချက်မရွေ့ မြန်မာပြည်ကြီးကတော့ ဝမ်းဗိုက်ဟောင်းလောင်းနဲ့ အခက်တွေ့။အစိုးရကအစ သူခိုးဓားပြ တွေဆိုပေါင်းစားတတ်မှ မိုးကျရွှေကိုယ်တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံး ပိုးကျနေလို့ သူများဆီမှာ ကျွန်ခံဖို့goကြပေဗျို့ ။ကောင်းကင်ကို
သရော်တော်တော် နောက်တောက်တောက်နဲ့ ခင်ဗျားအတည်ပေါက်တွေ လျှောက်လုပ်နေတယ် လူဘ၀ဆိုတာ တရားရှာရင်တရားရမယ် မယားရှာရင်မယားရမယ် အဲဒီလောက်ပါပဲ သိပ်လည်းတွေးခေါ်ချင်စရာမကောင်းပါဘူး ကံကြမ္မာကို အိပ်ကပ်ထဲအထပ်လိုက်ထည့်ဖြုန်း အချိန်ကာလကိုမုန်းတယ်ဆိုလည်း သံသရာဘီလ်စာရင်းကို အကြွေးဝယ်ကဒ်နဲ့ရှင်းလိုက်ယုံပဲ… မတတ်နိုင်တွေကိုအချိန်ကုန်ခံသယ်မလာနဲ့ အနုပညာလို့ပြောလည်း ဆာနေတဲ့ဝမ်းဗိုက်တွေက စွပ်ပြုတ်တစ်ခွက်လောက်မရနိုင်ဘူးလားတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သစ္စာရှင်ကြီးလို့ အမွှန်းတင်လည်း… ခင်းဗျားဦးခေါင်းက နံရံမှာကျွှဲချိုလို ချိတ်လို့မကောင်းဘူး…။ မိုးလှိုင်ည Posted by
ကိုက်ချီသွားတဲ့… အလွမ်းကို စစ်ပွဲကို ကျောခိုင်းသွားတဲ့ လူငယ်လို နာကျင်မှုကလွဲပြီး စစ်ပွဲဟာ ငါတို့ကို ဘာမှမပေးဘူး…. သေချာတဲ့သေခြင်းကို ဆောင်ယူသွားနိုင်သူတွေက အောင်မြင်ကြတယ်ပေါ့…. ကျန်ရစ်ခဲ့ရသူတွေက ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်ရင်း နောက်ထပ်စစ်ပွဲတစ်ခုကို ထပ်စောင့်ကြတယ်။ မိုးလှိုင်ည
အရည်မရ အဖတ်မရ စကားလုံးများဖြင့်စကြာဝဠာကြီးကို တည်ေ...